Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Iberia Advance Passenger Information through New Partnership
Airlines • Aviation • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News
Iberia ary Kyte - ny orinasa teknolojia sehatry ny sidina izay manolotra API marika fotsy ho an'ny zotram-piaramanidina ho SaaS - dia nanambara ny sonia fifanarahana.
Ny Kyte API dia fitaovana maoderina sy mora ampiharina izay ahafahan'ny mpaninjara indostrian'ny fitsangatsanganana mifandray mivantana amin'ny lisitry ny zotram-piaramanidina Espaniola rehetra ary miditra amin'ny vokatra amin'ny fomba haingana, mora ary mahomby.
Ity fifanarahana ity dia ampahany amin'ny iraka ataon'ny Kyte hanolotra teknolojia fivarotana mandroso amin'ny fantsona antsinjarany ho an'ny zotram-piaramanidina ary, miaraka amin'izay koa, manampy azy ireo hanova ny fomba hanitsiana ny vidiny sy hizarana ny vokatra ho an'ny mpanjifa, na amin'ny alàlan'ny mivantana na mivantana. fantsona ankolaka.
Alice Ferrari, Tale Jeneralin'ny Kyte dia naneho hevitra: “Tena mirehareha izahay fa iray amin'ireo mpamatsy API voalohany ho an'ny mpitarika zotram-piaramanidina toa an'i Iberia.
“Ny tanjonay dia ny hanampy ny zotram-piaramanidina hahatanteraka ny vinavinan'izy ireo amin'ny fanavaozana ny traikefa rehetra momba ny famandrihana. Manolotra fitaovana vaovao sy mora ampiasaina ho an'ny zotram-piaramanidina izahay izay natao hahafeno ny andrandraina amin'ny varotra an-tserasera ankehitriny. Izany rehetra izany dia tsy mampandefitra ny haavon'ny haingo ilaina amin'ny fitantanana ny fahasarotana sy ny filàna fiarovana izay takian'ny indostrian'ny fiaramanidina.
"Ny tanjonay dia ny hamolavola fifandraisana matanjaka sy maharitra amin'i Iberia ary hijery ny fomba araraotin'izy ireo ny fahafahana lehibe atolotry ny NDC."
Miguel Henales, Talen'ny Business Digital ao Iberia, nanampy hoe: "Ny valan'aretina ny fameperana dia nampitombo ny fanantenan'ny mpanjifa ary nanafaingana ny fironana nomerika. Noho ny teknolojian'ny NDC dia afaka manome fahafaham-po bebe kokoa ny filan'ny mpanjifa izahay ary manolotra serivisy tsara indrindra amin'ny fotoana famandrihana ary avy eo mitantana ny diany.
"Ny tanjonay farany dia ny hisarihana mpiara-miombon'antoka bebe kokoa amin'ny fantsona NDCy, manolotra fifandraisana maoderina toy ny Kyte API izay mamela ny fizarana tsara kokoa ny vokatray."